5-Philippe Coutinho- Barcelona
Philippe Coutinho ayaa si xun ugu dhibtoonaya kooxdii lacagtii abid ugu badnayd ee kooxdeeda kula wareegtay ee Barcelona wuxuuna hadda ka mid yahay ciyaartoyda lacagaha badan lagu iibsan karo.
Coutinho ayaa lumiyay samirkii kooxdiisa Barcelona waxaana hadda jirta cadaawad u dhexaysa isaga iyo taageerayasha Barcelona kuwaas oo doonaya in aanu kooxda baaqi ku sii ahaan xidiga reer Brazil.
Idaacada Cadena Ser ayaa shaacisay in Chelsea ay badalka Eden Hazard u calaamadsatay Philippe Coutinho haddii ay suurtogal noqoto in CAS ay kiiskooda ganaaxa suuqa dib ugu dhigto.
Man United ayaa hore u ahayd kooxda Coutinho inta ugu badan doonaysay laakiin iyaga oo hadda Red Devils ka maqan Champions League ayaan la filayn in Coutinho uu Old Trafford ku biiri doono.
Barcelona ayaa ku qasbanaan doonta in ay hoos u dhigto qiimihii 160 milyanka ahaa ee ay Liverpool kagala soo wareegtay Coutinho maadaama oo uu qiimihiisii suuqu si wayn hoos ugu dhacay.
Coutinho oo hadda xulka qarankiisa Brazil ula diyaar garoobaya tartanka Copa America ayaa si cad u qirtay in aanu soo qaadan xili ciyaareed fiican, wuxuuna hoosta ka xariiqay in qaab ciyaareedkiisii uu ka hooseeyay wixii uu xataa isagu filayay.
Laakiin Coutinho ayaa ka mid noqon kara ciyaartoyda magaca wayn ee xili suuqa furmi doona suuqa gilgili kara ee lacago badan lagu iibsan karo iyada oo PSG ay ka mid tahay kooxaha hore loola xidhiidhinayay.
4- Neymar Jr- PSG
Neymar Jr ayaa soo qaatay sanadkii waayihiisa ciyaareed ugu xumaa wuxuuna sanadkan 2019 ku ahaa mid cadaab ku noqday xidiga reer Brazil kadib markii ay isku raaceen arimo sumcadiisii dhulka jiiday.
Neymar jr waxaa ugu horayn ku habsaday dhaawicii uu saddexda bilood garoomada kaga manaa ee uu ku seegay kulamadii UEFA Champions league ee kooxdiisa PSG looga cidhibtiray tartanka kooxaha yurub.
Kadib waxa uu ganaax kala kulmay UEFA kadib markii uu aflagaadeeyay garsoorihii kulankii PSG iyo Man United ee Champions league balse waqti kadib waxa uu feedhay taageere taas oo keentay in ganaax kale gaadhka loo galiyay.
Kadib markii uu laba ganaax la kulmay waxa uu Neymar Jr u duulay Brazil halkaas oo loogu soo oogay dacwad ah in uu paris ku kufsaday gabadh dalkiisa Brazil u dhalatay.
Neymar jr oo ceebta la ciir-ciiraya ayuu dhaawac halis ah ku soo gaadhay kulankii saaxiibtinimo ee Brazil iyo Qatar waxayna taasi keentay in uu seegayo Copa America waana sababta uu 2019 ugu noqday sanad ciqaab ku noqday farxadiisii kubbada cagta.
Nemar Jr ayaa ayaa kooxdiisa PSG ku wargaliyay in aanu Paris ku soo laabandoonin sida uu shaaciyay wargayska Sport, wuxuuna doonayaa in uu ku laabto kooxdii uu sida sahlan kaga dhaqaaqay ee Barcelona.
Neymar Jr ayaa tan iyo markii uu PSG ku biiray waxa uu hoos uga soo dhacay maqaamkii uu kubbada cagta kaga jiray wuxuuna hadda noqday mid waayihiisii ciyaareed ee ifayay ay waxyeelo ku noqdeen dhacdooyinka banaanka garoonka ee uu ku soo dhex jiray.
In kooxda PSG ay xiisaynayso saxiixa Philippe Coutinho ayaa la sheegay in ay fure u noqon karto riyada Neymar jr uu ku doonayo in uu ugu soo laabto Barca balse maamulka PSG ayaan ahayn kuwo ciyaartoyda si sahlan ku sii dayn kara.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay Barcelona iyo PSG ku heshiiyaan in Neymar jr uu dib ugu laabto Camp Nou, waxa uu noqon doonaa heshiiska sanadka ee ugu hadal haynta badan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.